Shuruudaha farsamada ee ka shaqeynta qalabka iyo qaybaha
Weli ma ogid waxa farshaxanka xagasha madaxu yahay?
Madaxa xagalku waa qalab siyaado ah oo loo isticmaalo mashiinka. Ka dib marka madaxa xagalka lagu rakibo qalabka mashiinka, xariiqda wareega wareega ee qalabka waxaa lagu xaglin karaa xariiqda wareega wareegga si loo farsameeyo qalabka shaqada.
Astaamaha waxqabadka iyo socodka hawlgalka mashiinka axdi qarameedka gaaska
Mashiinka wax lagu shiido ee Gantry wuxuu leeyahay adkaansho ku filan, waxtar sare, hawl fudud, hawl fudud, qaab dhismeed dhammaystiran iyo astaamo kale.
Dayactirka mashiinka axdi qarameedka Gantry
Hagaajinta hagaha mashiinka wax lagu shiido ee Gantry: Hagaha qalabka mashiinka inta badan wuxuu ka sameysan yahay bir ama bir bir ah, noocan ah hagaha xoqan, waa in la hagaajiyaa, haddii kale waxay ka dhigeysaa xoqitaanka.
Ku saabsan mashiinnada wax shiidaya ee Gantry
Mashiinka wax lagu shiido ee Gantry, oo loo soo gaabiyo goynta wax lagu shiido, waa albaab albaab ah iyo sariir jiif ah oo dheer oo mashiinka wax shiidaya.
Sida loo dayactiro mashiinka wax shiidaya
Qaab dhismeedka guud ee mashiinka wax lagu shiido ee gantry wuxuu ka kooban yahay gantry, gantry wuxuu ka kooban yahay laba jibbaar, dogob, dogob biriijka, saqafka saqafka, daaqada iyo madax weyne qodista waxay ka kooban tahay qaab adag.